Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Neymar Jr ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro xidiga khadka dhexe ee koxoda Juventus Paul Pogba uu ku sheegay da’yar leh tayo aan caadi aheyn.
Pogba ayaa si weyn loola xiriirnayaa inuu ka tagi doono kooxdiisa waxaana si weyn u doonaya inta badan kooxaha waa weyn ee yurub oo ay Barca ka mid tahay wuxuuna hadalka Neymar sii shidayaa wararkii xanta aha ee sheegayay Pogba uu aadi doono Barca.
Neymar ayaa yiri “Isaga[Pogba] wali wuu yaryahay, wuxuu leeyahay tayo aan caadi aheyn, waan ka helaa sida uu u ciyaaro, waan ka helaa waxyaabaha uu sameyo, waan jeclaan lahaa inaan maaliyad ka badasho isaga, sidoo kale waxaan hubaa inuu ku soo bixi karo Barcelona, waxaan heysta maaliyado badan oo aan ciyaartooy ka badashay kuwaasoo wax badna iiga macno ah, sida xirfadlenimo, sida saaxiibo aan la kulmay oo ay kamid yihiin Robinho, Ronaldo, Ronaldinho.”
Sidoo kale xidigaan oo wareysi siinayay boga rasmiga ah ee La Liga ayaa amaanay kooxdiisa wuxuuna ka sheekeeyay waxa ka qanciyay kooxdiisa ilaa haatan wuxuuna yiri “Waxa aan ku jeclahay Barca waa in dhamaan ciyaartooyda yihiin kuwo heer caalami, kan ugu fiican waa Lionel Messi, halka saaxiibkeyga ugu fiican kubada cagta uu yahay Dani Alves,”.
Sidoo kale kabtanka Brazil ayaa sheegay inuu ku riyoonayo inuu xulkiisa u qaado koobka aduunka sidoo kalena uu shabaqa soo taabto kulanka finalka ah taasna ay tahay wax uu aad ugu riyoodo.
More in this category: « Zidane Oo Hadal Kooban Kaga Jawaabay Guuldaradii Kooxdiisa Ka Soo Gaadahay Cayaarta Champion-ka